ဘောင်ဘင်ခတ်ဦးမည်.. | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » ဘောင်ဘင်ခတ်ဦးမည်..
အခြား နည်းပညာ, ရောက်တတ်ရာရာ
Snow May April 4, 2012 at 9:21 AM
ဘောင်ဘင်ခတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ရေကူးကျင့်မလို့လား ထင်မိတာ :)
စာအုပ်လေးညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူးပဲ မောင်လေး ဒေါင်းပြီး ဖတ်လိုက်ဦးမယ်.
ချစ်စံအိမ် April 4, 2012 at 6:48 PM
ကိုနော် April 5, 2012 at 10:29 PM
ရေကူးမလို့မှတ်နေတာ ကျွန်တော်က ဟဟ
စံပယ်ချို April 7, 2012 at 1:16 AM
ရင်ဆူး April 7, 2012 at 8:44 AM
htay Lin December 21, 2013 at 3:29 AM
ငါ့ညီကတော့ move command နြဲ့ပီးမယ့်ဟာကို copy ပြီးမှ del ရတယ်လို့
မိုးသက် December 23, 2013 at 7:32 PM
ဟုတ်တယ်. ရေးထားတာကြာပီ အစ်ကို.။ သတိမထားမိဘူး.။ Move နဲ့ရတာ သိသွားပြီအခုတော့.. :))